Tengesa magetsi Bata Rivet, Bimetal Rivet, Trimetal Rivet. bimetal rivet Iyi yekubata ine yakanaka magetsi conduction uye iyo yepamusoro haina mhosva kune oxidization. Iko kuwedzerwa kwe3 - 28% mhangura kunogona kusimudzira zvinoshamisa sirivheri murazvo kuramba.
Riveti dzakasimba ndiyo yekutsanya inogara yakajairika inoshandiswa pamatehwe endege uye mapaneru. Pamberi pekushandisa, izvo zvinongova neyakagadzika shaft ine yakatenderera, yakapetwa musoro kune imwe mugumo Tinopa maSolid Sirivhi Rivets ayo akanaka makondakita emagetsi.
Nunura nenguva, quailty vimbiso, Independent magadzirirwo chakuvhuvhu, inofambiswa inofambiswa, Panzvimbo mutengi yokuedzwa, Analysis pamusoro priduct sezvamunoita.
Tri-simbi Bata Shanghai ZHJ matekinoroji Co., Ltd.
Kugadzikana kwayo kwemagetsi kuri nani pane kukwirana nekubata nemufananidzo wayo uye chinzvimbo. Nekuenzanisa neWelding Bata, ine ipfupi kupisa nguva uye yakachena nharaunda.
Bimetal mabhatani ekutaurirana anogona kupihwa muhombe varitey yekugadzirisa uye musanganiswa wezvinhu, Izvo zvinhu zveiyo inoshanda dura inogona kunge iri Ag, AgCdO kana AgNi, Forthe divi rekusungirirwa kune yekutsigira zvinhu simbi kana Cu-Ni alloy inogona kushandiswa, Ukobvu hwenzvimbo yepamusoro yekushanda iri mukati mehafu yehupamhi hwepamusoro hwepamusoro.
Sirivheri cadmium oxide yemagetsi yekudyidzana zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya, iyo yakadzika miri yekunyongana yekusangana mune vanobatana neiyo sublimation inogona kuita iyo inotonhora nzvimbo yekusangana, uye panguva imwechete kudzima maitiro, kudzivirira kusangana kunopisa.
AgSnO2, AgSnO2In2O3 kuonana kune zvakanakira kukwirira kuomarara, kukwirira kuramba fusion kutenderera uye kuramba kupisa nezvimwewo ..
Izvo zvinhu ndizvo zvakanakisa zvekuchengetedza mamiriro ezvinhu kutsiva AgCdO
SHZHJ inogadzira akasiyana ekutaurirana uye mamwe akafanirwa profiles ekushandisa akasiyana. Tinogona kuzadzikisa zvakanyanya zvinodiwa kune yakakwira voltage uye propulsion system zvinodiwa. Kunyangwe iri yeEMD yako, GE kana ALCO locomotive kana ako marori marori, iwe unoda mutengesi akavimbika, SHZHJ ndiyo sarudzo yakanakira iwe nekambani yako.